ဆေးဖက်ဝင်ကြက်သွန်ဖြူကို နေ့စဉ်စားခြင်းအကျိုး - APANNPYAY
Home / ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ / ဗဟုသုတအစုံ / ဆေးဖက်ဝင်ကြက်သွန်ဖြူကို နေ့စဉ်စားခြင်းအကျိုး
Apann Pyay 9:28 PM ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ , ဗဟုသုတအစုံ Edit
အချစ်ဆိုတာ ဒါမျိုးလား ဟ
တစ်ခါက အင်္ဂလန်နိုင်ငံသို့ ဘွဲ့လွန်ပါရဂူဘွဲ့ယူရန်သွားသော ဆရာဝန်ငယ်တစ်ဦးသည် အင်္ဂလန်ရောက်သောအခါ ဆောင်း ဥတု မကြုံစဖူးအေးသော ရာသီဥတုနှင့် ကြုံတွေ့ပြီး အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ခေါင်းကိုက်၊ နှာရည်ယိုသော ဝေဒနာများ ခံစားရလေ သည်။
မြန်မာပြည်မှထွက်လာခဲ့စဉ်က ဆေးလည်း ပါမလာခဲ့ သဖြင့် မိမိထက်အရင် ဆယ်နှစ်ကျော်က အင်္ဂလန်ရောက်နှင့်ပြီး ပါမောက္ခတာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော ဆရာဝန်ကြီးမိသားစု နေအိမ်သို့သွားရောက်ပြီး...
''ဆရာကြီး ကျွန်တော့မှာ အအေးပတ်နှာစေးဖြစ်နေလို့ ပိုးသတ်ဆေး(Anti-biotic)တစ်မျိုးလောက်ပေးပါ''လို့ တောင်း သတဲ့။ ဆရာဝန်ကြီးက ''အအေးပတ်တာလောက်နဲ့တော့ Anti-biotic တွေ မသောက်ပါနဲ့''လို့ ပြန်ပြောပြီး သူ့ဇနီးကို ''မိန်းမရေ . . . ငါတို့စားနေကျဆေးလေး လုပ်ပါကွာ''လို့ ပြော တယ်။ ခဏကြာတော့ ဆရာကြီးကတော် မီးဖိုချောင်ထဲက ထွက်လာပြီး ပန်းကန်ငယ်တစ်ခုနဲ့ထည့်လာတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ မီးဖုတ် မွှေးမွှေးလေး ချပေးတယ်။ ဆရာကြီးက ''မင်း ကြက်သွန်ဖြူ မီးဖုတ်စားလိုက်၊ နှာစေး ပျောက်သွားလိမ့်မယ်''လို့ ပြောပါသတဲ့။
ဤသည်မှာ လွန်ခဲ့သော ၁ဝ နှစ်ခန့်က အင်္ဂလန်မှပြန်လာ သောဆရာဝန်တစ်ဦး ရေးသားသောဆောင်းပါးမှ ကောက်နုတ် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အိမ်သုံးဆေးမြီးတိုနှင့် မီးဖိုချောင်မှဆေးမြီးတိုမျှဖြင့် ပျောက်နိုင်သောအရာများကို လျစ်လျူရှုပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသော ဆေးပြင်းများကို မသောက်သင့်ကြောင်း ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုယ်တိုင် ရေးသား ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရှေးကမြန်မာလူကြီးများသည် ကြက်သွန်ဖြူကို ဆီသတ် ဟင်းချက်ရာတွင် မွှေးကြိုင်အောင် သုံးသည့်အပြင် ဆေး ဖက်ဝင်သီးနှံအဖြစ်ပါ သုံးစွဲလေ့ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ ကြက်သွန်ဖြူ ဥမြွှာနှင့် ဥတစ်လုံးဟူ၍ရှိရာ နှစ်မျိုးစလုံးပင် ဆေးဖက်ဝင်သည်။ ကြက်သွန်ဖြူဥမြွှာများကို အစိမ်းအတိုင်း လက်ဖက်သုပ်၊ လက်ဖက်နှပ်များတွင် ထည့်စားလေ့ရှိသည်။ လက်ဖက်မှာ လေချုပ်သဖြင့် လေသက်သောကြက်သွန်ဖြူနှင့် တွဲစားခြင်းဖြစ်သည်။
သွေးတိုး၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းနှင့် လေဖြတ်ရောဂါကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ကြက်သွန်ဖြူဥကြီး၊ ဥတစ်လုံးများကို ပျားရည်နှင့်စိမ်ထားပြီး စားသူများရှိသည်။ ကြက်သွန်ဖြူကို တွယ်ချိတ်ကလေးဖြင့် အပေါက်များဖောက်ပြီး ပျားရည်တွင် စိမ်ထားကာ နေပြပြီး တစ်လခန့်ကြာမှ စားသုံးရသည်။ နေ ရောင်ဝင်စေရန် ဖန်ပုလင်းအဖြူရောင်နှင့်စိမ်လျှင် ပိုကောင်း သည်။ နေရောင်ခြည်မှ အပူဓာတ်သည် ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ပျားရည်ကို ပေါင်းစပ်သော အာနိသင်ရစေနိုင်သည်။
ဝမ်းကိုက်၊ သွေးပါရောဂါဖြစ်သူများသည် ထန်းလျက်ကို အမှုန့်ထောင်းပြီး ကြက်သွန်ဖြူနှင့်ကြော်စားလျှင် လေလည်၍ သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်။ အချို့က ကြက်သွန်ဖြူကို အခွံခွာ၊ နေလှန်းပြီး နွမ်းသွားသောအခါမှ ထန်းလျက်နှင့် ရော၍ ကြော်စားသည်။ ချိုသောအရသာရှိသဖြင့် ဝမ်းကိုက် သော ကလေးငယ်များပင် စားသုံးနိုင်သည်။
သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ သွားမကောင်းသဖြင့် အစာမကြေသူ များသည် ကြက်သွန်ဖြူ ဥမြွှာလေးများကို အခွံသင်ပြီး ပန်းကန်ငယ်ဖြင့်ထည့်ထားကာ ထမင်းစားတိုင်း အတို့အမြှုပ် လုပ်စားသင့်သည်။ ကြေညက်အောင်မဝါးနိုင်သော အစာများ ကို အစာအိမ်တွင်ကြေညက်စေရန် ကြက်သွန်ဖြူက အထောက် အကူပေးသည်။
ကြက်သွန်ဖြူကိုနေလှမ်းပြီး ကြက်သွန်ဖြူကြော် ပြုလုပ် ထားကာ မုန့်ဟင်းခါး၊ အသုပ်စုံများတွင် ထည့်စားသုံးခြင်းဖြင့် ဝမ်းတွင်းအစာရောက်ပြီးနောက် အပုပ်ဆန်ခြင်း၊ အထက်သို့ အစာပြန်အံခြင်း၊ လေလှန်ခြင်းများကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် မုန့်ဟင်းခါးမုန့်ဖတ်မှ အချဉ်ပေါက်ခြင်းကို ကြက်သွန်ဖြူကြော်က ကာကွယ်ပေးသည်။
လေသက်စေလိုလျှင် ကြက်သွန်ဖြူမီးဖုတ်စားခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ လူကြီးများသာမက ကလေးငယ် များကိုပါ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ခန့် ကျွေးသင့်သည်။ ရာသီ ဥတုအေးသော ဆောင်းရာသီတွင် အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ခေါင်း ကိုက်ခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်းများကို ကြက်သွန်ဖြူမီးဖုတ် စား ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပေသည်။
ကြက်သွန်ဖြူမီးဖုတ်စားခြင်းဖြင့် အအေးပတ်ခြင်း၊ အသံ ဝင်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်းများကိုလည်း သက်သာစေနိုင် သည်။
ဆောင်းဥတုတွင် အအေးပတ်သဖြင့် ကိုယ်တွင်းမှ အပူငွေ့ များသည် လည်ချောင်းမှအပေါ်သို့ တက်လာသည်။ ထိုအခါ ချောင်းဆိုးလာသည်။ ကြာသောအခါ အသံပါ ဝင်လာတတ် သည်။ လည်ချောင်းနာ ကြာလာလျှင် စစ်ဆေးကြည့်သင့်သည်။ အာသီးရောင်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်သည့်အတွက် ပေါ့ပေါ့ဆဆ မနေသင့်ပေ။
အအေးပတ်၍ ချောင်းဆိုးရာမှ လည်ချောင်းနာ၊ အသံဝင် ဖြစ်လျှင် အာသီးရောင်သောအဆင့်မရောက်မီ ကာကွယ်နိုင် သော မီးဖိုချောင်သုံးဆေးတစ်လက်မှာ ကြက်သွန်ဖြူဖြစ်သည်။
ကြက်သွန်ဖြူသည် ဥမြွှာမျိုးနှင့် ဥတစ်လုံးမျိုးဟူ၍ နှစ်မျိုး ရှိသည်။ နှစ်မျိုးလုံးပင် ဆေးဖက်ဝင်သည်။ အနောက်တိုင်း ဆေးပညာ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ကြက်သွန်ဖြူကို နေ့စဉ်စားသုံးလျှင် သွေးကျဲစေပြီး နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါကို ကောင်းစွာကာကွယ်နိုင်သည်။ ကိုလက်စထရော နှစ်မျိုးမှ(LDL)ခေါ် မကောင်းသော ကိုလက်စထရောကို ကျဆင်းစေနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
အအေးပတ်၊ အသံဝင်၊ လည်ချောင်းနာခြင်းတို့အတွက် ကြက်သွန်ဖြူ အမြွှာကြီးကြီး (သို့မဟုတ်) ဥတစ်လုံးကို ဝါး သို့မဟုတ် စတီးချောင်းနှင့် တံစို့ထိုးပြီး မီးကင်ပါ။ ကျွမ်းအောင် မီးမဖုတ်ပါနှင့်။ မီးကင်၍ နွမ်းသွားလျှင် ကြက်သွန်ဖြူအရောင် မှာ အဖြူမှအဝါရောင်သို့ ပြောင်းသွားပြီး မွှေးသောအနံ့ ထွက် လာပါလိမ့်မည်။
တစ်ကြိမ် ခုနှစ်မွှာခန့် စားပေးလျှင် လည်ချောင်းအတွင်းမှ အပူ၊ အခိုးအငွေ့များ ကင်းစင်စေနိုင်သည်။ အာသီးရောင် သည့်ပိုးကိုလည်း ကြက်သွန်ဖြူမှထွက်သောအဆီက သေစေ နိုင်သည်ဟု အဆိုရှိပါသည်။
ရှေးနှစ်တစ်ရာခန့်က ဆေးစာမှတ်စုများတွင် တိုင်းရင်း မြန်မာဆေးဆရာကြီးများသည် ကြက်သွန်ဖြူဥတစ်လုံးကို အခွံသင်၊ အပ်ဖြင့် အပေါက်ငယ်လေးများ ထွင်းဖောက်ပြီး ပျားရည်ဖြင့် စိမ်စေသည်။ ရက်သတ္တပတ်မျှ စိမ်ထားသော ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ပျားရည်ကို နေ့စဉ် ဥတစ်ဥနှင့် တစ်ဇွန်းမျှ ပုံမှန်စားခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခံအားကို ကောင်းစေသည်။ အဖျား အနာကိုလည်းကာကွယ်ပြီး ခံတွင်းကောင်း နှုတ်မြိန်ဆေးအဖြစ် လူကြီးများကို ပေးလေ့ရှိကြောင်း ဖတ်ရှုမှတ်သားရသည်။
သွေးတိုး၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါနှင့် လေဖြတ်ရောဂါ ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ကြက်သွန်ဖြူဥကြီး ဥတစ်လုံးများကို ပျားရည်နှင့်စိမ်ထားပြီး စားသူများလည်း ရှိသည်။
ကြက်သွန်ဖြူသည် အနံ့ပြင်းသဖြင့် အစားရခက်သူများ အတွက် မစားသုံးမီ ကြက်သွန်ဖြူဥများကို ဓားဖြင့် ခပ်ပါးပါး လှီးပြီးနောက် သံပုရာရည်ညှစ်လိုက်လျှင် အနံ့ဆိုးများပျောက် ကင်းပြီး အချဉ်ပွဲအဖြစ်ပါ စားသုံးနိုင်သည်။ ကြက်သွန်နီနှင့် လည်းတွဲဖက်ပြီး အချဉ်ညှစ်စားသုံးလေ့ရှိကြသည်။ ရှေးမြန်မာ လူကြီးများသည် လက်ဖက်စားလျှင် လေချုပ်မည်စိုးသဖြင့် ကြက်သွန်ဖြူကြော်ဖြင့် တွဲဖက်စားသုံးကြသည်။ ကြက်သွန်ဖြူ သည် လေသက်စေသောအစာဖြစ်သဖြင့် လေချုပ်ခြင်းကို လည်း ကာကွယ်နိုင်သည်။
ကျန်းမာရေးအတွက် ကြက်သွန်ဖြူကို ပုံမှန်စားသုံးရန် အညွှန်းမှာ-
လေသက်၊ ဗိုက်ချပ်ချင်လျှင် မီးဖုတ်စားပါ။
ပျားရည်နှင့်စိမ်နည်း နောက်တစ်နည်းမှာ ကြက်သွန်ဖြူ ဥတစ်လုံးကို အခွံခွာပြီး ရေငွေ့စင်အောင် တစ်နေ့ နေလှန်း လိုက်ပါ။ အနည်းငယ်ခြောက်သွေ့သွားသောအခါ အချို့က အပ်နှင့် အပေါက်ဖောက်သည်။ နေလှန်းထားလျှင် ရေငွေ့စင် သဖြင့် အပေါက်မဖောက်လျှင်လည်း ရပါသည်။ ကြက်သွန်ဖြူ ကို ဇွန်းဖြင့်ဆယ်လျှင် ဝင်နိုင်သည့် ပုလင်းအဝကျယ်ထဲမှာထည့်၊ ပျားရည် သင့်သလောက် မြုပ်အောင်ထည့်၊ လုံအောင်ပိတ်ပြီး သုံးရက်ခန့်နေပြပြီးလျှင် စားလို့ရပါပြီ။
ပျားရည်စိမ်ထားသော ကြက်သွန်ဖြူဥတစ်လုံးကို နေ့လယ် ထမင်းစားပြီး တစ်ဥ၊ ညထမင်းစားပြီးတစ်ဥ စားပါ။ ၄၅ ရက်စာ ဥ ၉ဝ စိမ်ပါ။ ပုလင်းသေးလျှင် နှစ်ပုလင်း၊ သုံးပုလင်း ခွဲစိမ်ပါ။ နှစ်နှင့်ချီပြီး စားလို့ရပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အ္တရာယ် မရှိပါ။ ဤနည်းဖြင့် အဆုတ်တွင် ကင်ဆာကဲ့သို့ အလုံးရှိသူ တစ်ဦး ပျောက်ကင်းဖူးပါသည်။ အဆုတ်ရေဝင်ခြင်းကိုလည်း နိုင်ပါသည်။ လည်ချောင်းနာပြီး အသံအိုးရောင်ကာ အသံ အက်နေသူမှာ ခုနစ်ရက်ခန့်စားလျှင် သက်သာနိုင်ပါသည်။
ကြက်သွန်ဖြူမီးဖုတ် စားသူများသည် ရေခဲရေ၊ ရေခဲသေတ္တာ မှထွက်သောရေအေး၊ အချိုရည်ဘူးများ လုံးဝမသောက်ဘဲ ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် အပူများ အောက်သို့ သက်စေ ရန် ညအိပ်ယာဝင်ချိန်မှာ ဒူးအောက်ပိုင်း ခြေနှစ်ဖက်ကို ရေဆေးအိပ်ပါ။ ။
အခဈြဆိုတာ ဒါမြိုးလား ဟ
တဈခါက အင်ျဂလနျနိုငျငံသို့ ဘှဲ့လှနျပါရဂူဘှဲ့ယူရနျသှားသော ဆရာဝနျငယျတဈဦးသညျ အင်ျဂလနျရောကျသောအခါ ဆောငျး ဥတု မကွုံစဖူးအေးသော ရာသီဥတုနှငျ့ ကွုံတှပွေီ့း အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ခေါငျးကိုကျ၊ နှာရညျယိုသော ဝဒေနာမြား ခံစားရလေ သညျ။
မွနျမာပွညျမှထှကျလာခဲ့စဉျက ဆေးလညျး ပါမလာခဲ့ သဖွငျ့ မိမိထကျအရငျ ဆယျနှဈကြျောက အင်ျဂလနျရောကျနှငျ့ပွီး ပါမောက်ခတာဝနျ ထမျးဆောငျနသေော ဆရာဝနျကွီးမိသားစု နအေိမျသို့သှားရောကျပွီး...
''ဆရာကွီး ကြှနျတော့မှာ အအေးပတျနှာစေးဖွဈနလေို့ ပိုးသတျဆေး(Anti-biotic)တဈမြိုးလောကျပေးပါ''လို့ တောငျး သတဲ့။ ဆရာဝနျကွီးက ''အအေးပတျတာလောကျနဲ့တော့ Anti-biotic တှေ မသောကျပါနဲ့''လို့ ပွနျပွောပွီး သူ့ဇနီးကို ''မိနျးမရေ . . . ငါတို့စားနကေဆြေးလေး လုပျပါကှာ''လို့ ပွော တယျ။ ခဏကွာတော့ ဆရာကွီးကတျော မီးဖိုခြောငျထဲက ထှကျလာပွီး ပနျးကနျငယျတဈခုနဲ့ထညျ့လာတဲ့ ကွကျသှနျဖွူ မီးဖုတျ မှေးမှေးလေး ခပြေးတယျ။ ဆရာကွီးက ''မငျး ကွကျသှနျဖွူ မီးဖုတျစားလိုကျ၊ နှာစေး ပြောကျသှားလိမျ့မယျ''လို့ ပွောပါသတဲ့။
ဤသညျမှာ လှနျခဲ့သော ၁ဝ နှဈခနျ့က အင်ျဂလနျမှပွနျလာ သောဆရာဝနျတဈဦး ရေးသားသောဆောငျးပါးမှ ကောကျနုတျ ဖျောပွခွငျးဖွဈပါသညျ။ တဈခါတဈရံ အိမျသုံးဆေးမွီးတိုနှငျ့ မီးဖိုခြောငျမှဆေးမွီးတိုမြှဖွငျ့ ပြောကျနိုငျသောအရာမြားကို လဈြလြူရှုပွီး ဘေးထှကျဆိုးကြိုးရှိသော ဆေးပွငျးမြားကို မသောကျသငျ့ကွောငျး ဆရာဝနျတဈဦးကိုယျတိုငျ ရေးသား ထားခွငျးဖွဈပါသညျ။
ရှေးကမွနျမာလူကွီးမြားသညျ ကွကျသှနျဖွူကို ဆီသတျ ဟငျးခကျြရာတှငျ မှေးကွိုငျအောငျ သုံးသညျ့အပွငျ ဆေး ဖကျဝငျသီးနှံအဖွဈပါ သုံးစှဲလရှေိ့ကွောငျး တှရေ့သညျ။ ကွကျသှနျဖွူ ဥမွှာနှငျ့ ဥတဈလုံးဟူ၍ရှိရာ နှဈမြိုးစလုံးပငျ ဆေးဖကျဝငျသညျ။ ကွကျသှနျဖွူဥမွှာမြားကို အစိမျးအတိုငျး လကျဖကျသုပျ၊ လကျဖကျနှပျမြားတှငျ ထညျ့စားလရှေိ့သညျ။ လကျဖကျမှာ လခြေုပျသဖွငျ့ လသေကျသောကွကျသှနျဖွူနှငျ့ တှဲစားခွငျးဖွဈသညျ။
သှေးတိုး၊ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးနှငျ့ လဖွေတျရောဂါကို ကာကှယျရနျအတှကျ ကွကျသှနျဖွူဥကွီး၊ ဥတဈလုံးမြားကို ပြားရညျနှငျ့စိမျထားပွီး စားသူမြားရှိသညျ။ ကွကျသှနျဖွူကို တှယျခြိတျကလေးဖွငျ့ အပေါကျမြားဖောကျပွီး ပြားရညျတှငျ စိမျထားကာ နပွေပွီး တဈလခနျ့ကွာမှ စားသုံးရသညျ။ နေ ရောငျဝငျစရေနျ ဖနျပုလငျးအဖွူရောငျနှငျ့စိမျလြှငျ ပိုကောငျး သညျ။ နရေောငျခွညျမှ အပူဓာတျသညျ ကွကျသှနျဖွူနှငျ့ ပြားရညျကို ပေါငျးစပျသော အာနိသငျရစနေိုငျသညျ။
ဝမျးကိုကျ၊ သှေးပါရောဂါဖွဈသူမြားသညျ ထနျးလကျြကို အမှုနျ့ထောငျးပွီး ကွကျသှနျဖွူနှငျ့ကွျောစားလြှငျ လလေညျ၍ သကျသာပြောကျကငျးစနေိုငျသညျ။ အခြို့က ကွကျသှနျဖွူကို အခှံခှာ၊ နလှေနျးပွီး နှမျးသှားသောအခါမှ ထနျးလကျြနှငျ့ ရော၍ ကွျောစားသညျ။ ခြိုသောအရသာရှိသဖွငျ့ ဝမျးကိုကျ သော ကလေးငယျမြားပငျ စားသုံးနိုငျသညျ။
သကျကွီးရှယျအိုမြား၊ သှားမကောငျးသဖွငျ့ အစာမကွသေူ မြားသညျ ကွကျသှနျဖွူ ဥမွှာလေးမြားကို အခှံသငျပွီး ပနျးကနျငယျဖွငျ့ထညျ့ထားကာ ထမငျးစားတိုငျး အတို့အမွှုပျ လုပျစားသငျ့သညျ။ ကွညေကျအောငျမဝါးနိုငျသော အစာမြား ကို အစာအိမျတှငျကွညေကျစရေနျ ကွကျသှနျဖွူက အထောကျ အကူပေးသညျ။
ကွကျသှနျဖွူကိုနလှေမျးပွီး ကွကျသှနျဖွူကွျော ပွုလုပျ ထားကာ မုနျ့ဟငျးခါး၊ အသုပျစုံမြားတှငျ ထညျ့စားသုံးခွငျးဖွငျ့ ဝမျးတှငျးအစာရောကျပွီးနောကျ အပုပျဆနျခွငျး၊ အထကျသို့ အစာပွနျအံခွငျး၊ လလှေနျခွငျးမြားကို ကာကှယျနိုငျသညျ။ အထူးသဖွငျ့ မုနျ့ဟငျးခါးမုနျ့ဖတျမှ အခဉျြပေါကျခွငျးကို ကွကျသှနျဖွူကွျောက ကာကှယျပေးသညျ။
လသေကျစလေိုလြှငျ ကွကျသှနျဖွူမီးဖုတျစားခွငျးသညျ အကောငျးဆုံးဖွဈသညျ။ လူကွီးမြားသာမက ကလေးငယျ မြားကိုပါ တဈပတျလြှငျတဈကွိမျခနျ့ ကြှေးသငျ့သညျ။ ရာသီ ဥတုအေးသော ဆောငျးရာသီတှငျ အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ခေါငျး ကိုကျခွငျး၊ နှာရညျယိုခွငျးမြားကို ကွကျသှနျဖွူမီးဖုတျ စား ခွငျးဖွငျ့ ကာကှယျနိုငျကွောငျး တငျပွလိုကျရပသေညျ။
ကွကျသှနျဖွူမီးဖုတျစားခွငျးဖွငျ့ အအေးပတျခွငျး၊ အသံ ဝငျခွငျး၊ လညျခြောငျးနာခွငျးမြားကိုလညျး သကျသာစနေိုငျ သညျ။
ဆောငျးဥတုတှငျ အအေးပတျသဖွငျ့ ကိုယျတှငျးမှ အပူငှေ့ မြားသညျ လညျခြောငျးမှအပျေါသို့ တကျလာသညျ။ ထိုအခါ ခြောငျးဆိုးလာသညျ။ ကွာသောအခါ အသံပါ ဝငျလာတတျ သညျ။ လညျခြောငျးနာ ကွာလာလြှငျ စဈဆေးကွညျ့သငျ့သညျ။ အာသီးရောငျရောဂါ ဖွဈနိုငျသညျ့အတှကျ ပေါ့ပေါ့ဆဆ မနသေငျ့ပေ။
အအေးပတျ၍ ခြောငျးဆိုးရာမှ လညျခြောငျးနာ၊ အသံဝငျ ဖွဈလြှငျ အာသီးရောငျသောအဆငျ့မရောကျမီ ကာကှယျနိုငျ သော မီးဖိုခြောငျသုံးဆေးတဈလကျမှာ ကွကျသှနျဖွူဖွဈသညျ။
ကွကျသှနျဖွူသညျ ဥမွှာမြိုးနှငျ့ ဥတဈလုံးမြိုးဟူ၍ နှဈမြိုး ရှိသညျ။ နှဈမြိုးလုံးပငျ ဆေးဖကျဝငျသညျ။ အနောကျတိုငျး ဆေးပညာ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြမြားအရ ကွကျသှနျဖွူကို နစေ့ဉျစားသုံးလြှငျ သှေးကြဲစပွေီး နှလုံးသှေးကွောကဉျြး ရောဂါကို ကောငျးစှာကာကှယျနိုငျသညျ။ ကိုလကျစထရော နှဈမြိုးမှ(LDL)ချေါ မကောငျးသော ကိုလကျစထရောကို ကဆြငျးစနေိုငျသညျဟုဆိုသညျ။
အအေးပတျ၊ အသံဝငျ၊ လညျခြောငျးနာခွငျးတို့အတှကျ ကွကျသှနျဖွူ အမွှာကွီးကွီး (သို့မဟုတျ) ဥတဈလုံးကို ဝါး သို့မဟုတျ စတီးခြောငျးနှငျ့ တံစို့ထိုးပွီး မီးကငျပါ။ ကြှမျးအောငျ မီးမဖုတျပါနှငျ့။ မီးကငျ၍ နှမျးသှားလြှငျ ကွကျသှနျဖွူအရောငျ မှာ အဖွူမှအဝါရောငျသို့ ပွောငျးသှားပွီး မှေးသောအနံ့ ထှကျ လာပါလိမျ့မညျ။
တဈကွိမျ ခုနှဈမှာခနျ့ စားပေးလြှငျ လညျခြောငျးအတှငျးမှ အပူ၊ အခိုးအငှမြေ့ား ကငျးစငျစနေိုငျသညျ။ အာသီးရောငျ သညျ့ပိုးကိုလညျး ကွကျသှနျဖွူမှထှကျသောအဆီက သစေေ နိုငျသညျဟု အဆိုရှိပါသညျ။
ရှေးနှဈတဈရာခနျ့က ဆေးစာမှတျစုမြားတှငျ တိုငျးရငျး မွနျမာဆေးဆရာကွီးမြားသညျ ကွကျသှနျဖွူဥတဈလုံးကို အခှံသငျ၊ အပျဖွငျ့ အပေါကျငယျလေးမြား ထှငျးဖောကျပွီး ပြားရညျဖွငျ့ စိမျစသေညျ။ ရကျသတ်တပတျမြှ စိမျထားသော ကွကျသှနျဖွူနှငျ့ ပြားရညျကို နစေ့ဉျ ဥတဈဥနှငျ့ တဈဇှနျးမြှ ပုံမှနျစားခွငျးဖွငျ့ ကိုယျခံအားကို ကောငျးစသေညျ။ အဖြား အနာကိုလညျးကာကှယျပွီး ခံတှငျးကောငျး နှုတျမွိနျဆေးအဖွဈ လူကွီးမြားကို ပေးလရှေိ့ကွောငျး ဖတျရှုမှတျသားရသညျ။
သှေးတိုး၊ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါနှငျ့ လဖွေတျရောဂါ ကို ကာကှယျရနျအတှကျ ကွကျသှနျဖွူဥကွီး ဥတဈလုံးမြားကို ပြားရညျနှငျ့စိမျထားပွီး စားသူမြားလညျး ရှိသညျ။
ကွကျသှနျဖွူသညျ အနံ့ပွငျးသဖွငျ့ အစားရခကျသူမြား အတှကျ မစားသုံးမီ ကွကျသှနျဖွူဥမြားကို ဓားဖွငျ့ ခပျပါးပါး လှီးပွီးနောကျ သံပုရာရညျညှဈလိုကျလြှငျ အနံ့ဆိုးမြားပြောကျ ကငျးပွီး အခဉျြပှဲအဖွဈပါ စားသုံးနိုငျသညျ။ ကွကျသှနျနီနှငျ့ လညျးတှဲဖကျပွီး အခဉျြညှဈစားသုံးလရှေိ့ကွသညျ။ ရှေးမွနျမာ လူကွီးမြားသညျ လကျဖကျစားလြှငျ လခြေုပျမညျစိုးသဖွငျ့ ကွကျသှနျဖွူကွျောဖွငျ့ တှဲဖကျစားသုံးကွသညျ။ ကွကျသှနျဖွူ သညျ လသေကျစသေောအစာဖွဈသဖွငျ့ လခြေုပျခွငျးကို လညျး ကာကှယျနိုငျသညျ။
ကနျြးမာရေးအတှကျ ကွကျသှနျဖွူကို ပုံမှနျစားသုံးရနျ အညှနျးမှာ-
လသေကျ၊ ဗိုကျခပျြခငျြလြှငျ မီးဖုတျစားပါ။
ပြားရညျနှငျ့စိမျနညျး နောကျတဈနညျးမှာ ကွကျသှနျဖွူ ဥတဈလုံးကို အခှံခှာပွီး ရငှေစေ့ငျအောငျ တဈနေ့ နလှေနျး လိုကျပါ။ အနညျးငယျခွောကျသှသှေ့ားသောအခါ အခြို့က အပျနှငျ့ အပေါကျဖောကျသညျ။ နလှေနျးထားလြှငျ ရငှေစေ့ငျ သဖွငျ့ အပေါကျမဖောကျလြှငျလညျး ရပါသညျ။ ကွကျသှနျဖွူ ကို ဇှနျးဖွငျ့ဆယျလြှငျ ဝငျနိုငျသညျ့ ပုလငျးအဝကယျြထဲမှာထညျ့၊ ပြားရညျ သငျ့သလောကျ မွုပျအောငျထညျ့၊ လုံအောငျပိတျပွီး သုံးရကျခနျ့နပွေပွီးလြှငျ စားလို့ရပါပွီ။
ပြားရညျစိမျထားသော ကွကျသှနျဖွူဥတဈလုံးကို နလေ့ယျ ထမငျးစားပွီး တဈဥ၊ ညထမငျးစားပွီးတဈဥ စားပါ။ ၄၅ ရကျစာ ဥ ၉ဝ စိမျပါ။ ပုလငျးသေးလြှငျ နှဈပုလငျး၊ သုံးပုလငျး ခှဲစိမျပါ။ နှဈနှငျ့ခြီပွီး စားလို့ရပါသညျ။ ဘေးထှကျဆိုးကြိုး အ်တရာယျ မရှိပါ။ ဤနညျးဖွငျ့ အဆုတျတှငျ ကငျဆာကဲ့သို့ အလုံးရှိသူ တဈဦး ပြောကျကငျးဖူးပါသညျ။ အဆုတျရဝေငျခွငျးကိုလညျး နိုငျပါသညျ။ လညျခြောငျးနာပွီး အသံအိုးရောငျကာ အသံ အကျနသေူမှာ ခုနဈရကျခနျ့စားလြှငျ သကျသာနိုငျပါသညျ။
ကွကျသှနျဖွူမီးဖုတျ စားသူမြားသညျ ရခေဲရေ၊ ရခေဲသတ်ေတာ မှထှကျသောရအေေး၊ အခြိုရညျဘူးမြား လုံးဝမသောကျဘဲ ရှောငျကွဉျရပါမညျ။ ဖွဈနိုငျလြှငျ အပူမြား အောကျသို့ သကျစေ ရနျ ညအိပျယာဝငျခြိနျမှာ ဒူးအောကျပိုငျး ခွနှေဈဖကျကို ရဆေေးအိပျပါ။ ။